Dr. Tint Swe's Writings: February 2020
ကျေးဇူးပါဆရာ ဒါဆို စိုးရိမ်စရာ မလိုဘူးပေါ့နော်။
စိုးရိမ်ရသလားမေးခွန်းကို ဘယ်သူကမေမေး မဖြေပါ။ စိုးရိမ်စိတ်ဆိုတာ အတော်ကို မတူကြပါ။ ကလေးမကျန်းမာတာကို အမေနဲ့ အဖေ စိုးရိမ်တာ မတူကြ။
ကျား နဲ့ မ ဖြစ်လို့သာမဟုတ်။ ရောဂါအကြောင်း ပိုသိသူနဲ့ မသိသူ စိုးရိမ်မှု မတူပါ။
တချို့က အဖြစ်သဲတယ်။ နည်းနည်းလေးဖြစ်တာ ပြာပြာသလဲ ဖြစ်တယ်။ တချို့က ကင်ဆာဖြစ်နေလည်း ဖေ့စ်ဘွတ်ဆေးနည်းနဲ့ ကျေနပ်တယ်။
လူနာတယောက်တည်းအပေါ်မှာထားတဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ လူနာရှင် စိုးရိမ်မှု မတူပါ။
အရပ်စကား မြန်မာလို စိုးရိမ်မှုကို ဆေးပညာနဲ့ ခွဲထားတာတွေ များတယ်။ မတူပါ။ ဆေးပညာသင်ယူသူမဟုတ်သူတွေကို ပြောရင် ခေါင်းရှုတ်စေမယ်။
အဲလိုမေးခွန်းလာရင် ဆရာဝန်တွေက နှုတ်စောင့်ကြတယ်။ ဆရာဝန်က မစိုးရိမ်ပါနဲ့လို့ပြောခြင်းဟာ ရောဂါကို ကုသတာ မဟုတ်ပါ။
၁။ နဲ့ဆိုတာ နှင့်ကို ဆိုလိုတာလား ဖြင့်ကို ဆိုလိုတာလား။
၂။ ဆရာ နဲ့၊ နှင့်အကြောင်း တခါတလေ ရောသွားတယ်ဆရာ။ ဆရာ အားတဲ့အချိန်လေး ခွဲခြားရေးပေးစေချင်တယ်။
၃။ ဆရာ နဲ့ အသုံး နှင့် အသုံးလေးလည်း သိပါရစေရှင့်။
၄။ နဲ့ နှင့် တင်ပေးပါဆရာ။
၅။ မင်းနဲ့ငါ မင်းနှင့်ငါ ဘယ်ဟာအမှန်လဲဆရာ။
စကား နဲ့ စာ၊ စာ နှင့် စကား ဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်ထပ်နှင့် အောက်ထပ် ဇာတ်လမ်း
တချို့က နက်ဆိုပြီး မှားရေးနေကြတာ မေးခွန်းမှာ မနည်းပါ
ဟူသဖြင့် = ဟူ၍
အားဖြင့် = အားနှင့်
စာကို စကားပြောသလိုရေးနည်းမှာ နှင့် အစား နဲ့ လို့လည်းရေးကြတယ်။ မင်းနဲ့ငါ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သွားမယ်။ စကားပြောစာရေးနည်း၊ သီချင်း၊ ကဗျာ၊ ကာတွန်း၊ သံချပ်၊ ဆောင်ပုဒ် စတာတွေမှာ စကားပြောသတ်ပုံနဲ့ ရေးလေ့ရှိပါတယ်။
Coronavirus Misinformation အီရန်နဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သတင်းမှားတွေ
အီရန်မှာလည်း မြန်မာပြည်လိုပဲ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် သတင်းမှားတွေ ဖြန့်နေကြတယ်။ လူလိမ်တွေပေါတဲ့ တိုင်းပြည်တွေ။
Covid-19 လူနာ ၃၈၈ ယောက်ရှိပြီး သေဆုံးသူ ၃၄ ယောက်ရှိပြီ။ တရုပ်ပြည်ပြီးရင် သေဆုံးမှု အများဆုံး။ ဘီဘီစီ ပါရှန် သတင်းထောက်အဆိုအရ သေဆုံးသူ ၂၁၀ ရှိနိုင်သတဲ့။ ဆောရီး။
အဲဒီနိုင်ငံမှာ စာအတုတွေ။ တာဝန်ရှိသူတွေကို မမှန်တဲ့ ပြစ်တင်မှုတွေ၊ ထင်ကြေးတွေ၊ အလွဲတွေဖြန့်နေကြတယ်။ ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းတွေမှားသတဲ့။
ဆိုရှယ်မီဒီယားမှာ အတော်ကိုလွဲမှားတဲ့ ပို့စ်တွေကလည်း တင်ကြပါသတဲ့။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Saeed Namaki နာမာကီ နုတ်ထွက်စာတင်တယ်လို့ လိမ်ရေးတယ်။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးက ကူးစက်သူတွေကို သီးခြားခွဲထားရန်မလိုလို့ပြောတဲ့ အသံဖိုင်အတုတွေလည်း လုပ်ကြတယ်။ လူaygif; တသန်းကူးစက်ခံရတာသေချာပြီး လူ ၁၄၀၀ သေတယ်လို့ ဝန်ကြီးအသံနဲ့ အတုလုပ်ကြတယ်။
အမျိုးသမီးနဲ့ မိသားစုရေးရာ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Masoumeh Ebtekar မက်ဆိုးမက် အီဘက်ကာ ကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ ဆေးရုံကုတင်ပေါ်မှာ ပုံအတုနဲ့ လိမ်တယ်။ အဲဒီပုံအစစ်က ၂၀၁၄ တုန်းက ကားမတော်တဆဖြစ်စဉ်က။
ကာကွယ်နည်းအတုတွေ ကုသနည်းအတုတွေ လုပ်ကြတယ်။ Khabar Online ခါဘာ အွန်လိုင်းမီဒီယာကနေ ဗနီဂါ သောက်ပါ။ နှင်းဆီရေ သောက်ပါတဲ့။ ကုံကမံရည်သောက်နေပုံ၊ သစ်ကြံပိုးခေါက်ရည်သောက်နေပုံ၊ မန်ကျီးမှည့်ရည် သောက်နေပုံ၊ နနွင်းရည်သောက်နေပုံတွေ ပါတယ်။
နောက်တမျိုးက စွန်ပလွန်သီးစားပါတဲ့။ အီရန်-ဂျာမန် ဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြောဆရာဝန် Majid Samii က ပြောတာတဲ့။
မင်းသမီး Behnoush Bakhtiari ဘခါတီက သူ့ အင်စတီဂရမ် ဖေါ်လိုဝါ ၁့၈ သန်းကို ဗီဒီယိုကနေ တိုင်းရင်းဆေးနည်း ညွှန်လို့ ပြစ်တင်ဝေဘန်ခံရတယ်။ အဲတော့မှ မင်းသမီးက သူပြောခဲ့တာကို လျောချသွားတယ်။
Ali Akbar Raefipour ရေဖီပူးဝါး တိုသူက အကြံအဖန်သီအိုရီတင်ပြတယ်။ hybrid warfare ဟိုက်ဘရစ်စစ်ဆင်ရေးတဲ့။ အမေရိကန်က အီရန်ကို တိုက်ခိုက်တာတဲ့။ ဇီဝစစ်ဆင်ရေးတဲ့။ အဲတာကို မြန်မာဘာသာပြန်တင်တာတွေ တွေ့ပါတယ်။
အီရန်ဆိုက်ဘာရဲအရာရှိ Vahid Majid ဗာဟစ်မဂျစ်အဆိုအရ ၂၄ ယောက်ကို ဖမ်းထားပါသတဲ့။ ကောလာဟလဖြန့်သူ ၁၁၈ ယောက်ကို သတိပေးထားပါသတဲ့။
အီရန်က သတင်းအတု အလိမ်အညာတွေ အားလုံး မြန်မာပြည်မှာရှိတယ်။ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ မတူပါ။ လူတွေက မဟုတ်တာပြောရာမှာ တူကြတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကို ရေးတာဖြစ်ပါတယ်။ တရုပ်ပြည်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ရောဂါဖြစ်နေစဉ် နာဆာ ခေါ် အမေရိကန် အာကာသလေ့လာရေးဌာနက ဂြိုဟ်တုဓါတ်ပုံတွေအရ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု နည်းလာတာကို တွေ့ရှိရပါသတဲ့။
ဒီနှစ်ထဲမှာ nitrogen dioxide နိုက်ထရိုဂျင်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် စုဝေးမှု နည်းလာတယ်။ အဲဒီဓါတ်ငွေ့က စက်ရုံတွေ ကားတွေကနေ ထွက်တယ်။ ၂၀၁၉ ခု ပဌမ ၂ လကပုံတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး လေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်။
စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေနည်းပါးလာတာနဲ့ ဆက်စပ်နေနိုင်ပါတယ်။ စက်ရုံတွေ ပိတ်ထားရတယ်။ ယာဉ်အသွားအလာတွေ သိသိသာသာနည်းလာတယ်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် စီးပွါးရေးကပ်သင့်စဉ်ကလည်း အဲလို နိုက်ထရိုဂျင်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် စုဝေးမှုနည်းခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာစာလောကမှာ သူခိုးတက်ပြားတွေရှိတယ်။ မကောင်းပါ။
ကွန်မင့်တခု လာပြန်တယ်။ ကြက်သွန်နီ၊ အရက်၊ အပူချိန်၊ အဲယားကွန်း၊ ရေသောက်၊ ဂျင်း၊ ရဲယိုရွက်၊ စတာတွေ နောက်မှာ လာတာ။ လာဦးမယ်။
ကျန်ခဲ့တဲ့မိုးတွင်းက မြန်မာပြည်မှာ ဆင်တုတ်ကွေး လူတိုင်းနီးပါးလောက် ဖြစ်ကြတယ် အဲ့ဒါလည်း Virus ပဲပေါ့နော့ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဆီကလူတွေ နီးလျက်နဲ့ မဖြစ်တာ ရောဂါခံနိုင်ရည် ရှိသွားလားမသိဘူးခမျာ
အဲလို ရမ်းပြောတာတွေကို မဖြေလိုပါ။ အထင်နဲ့ ရမ်းပြောတာတွေ ၁၀၀% နီးပါး မှားတယ်။
Chikungunya ချီကန်ဂွန်ညာ ခေါ် ဆင်ဖြူတော်တုပ်ကွေးက တမျိုး။
တရုပ်ပြည်မှာ SARS ခေါ် ဆားစ်ကူးစက်ရောဂါ ၂၀၀၂ ကနေ ၂၀၀၄ အထိဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲတာကလည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးအစားပဲ။ လူကြီးမင်း ရမ်းတွေးသလိုသာဆို အခု Covid-19 ခေါ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ရောဂါ တရုပ်ပြည်မှာ မဖြစ်ရတော့ဘူးလား။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကနေ့ထိ သိထားတဲ့ ဗိုင်းရပ်အမျိုးအစားပေါင်း ၅၀၀၀ လောက်ရှိပြီ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် စက်တင်္ဘာမှာ NCBI Virus genome database စာရင်းအရ ဗိုင်းရပ်စ် ဂျီနွမ်းပေါင်း ၇၅၀၀၀ ကို သိရှိထားပြီဖြစ်တယ်။ တကယ်တန်း ဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးအစား သန်းဂဏန်းအထိရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားတယ်။
ရမ်းပြောတာတွေ ၁၀၀% နီးပါး မှားတယ်။ လာဦးမယ်။
• ယူအက်စ်မှာ အသက် ၅၀ အမျိုးသမီး ပဌမဆုံးသေဆုံး။ ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ကဖြစ်။
• တောင်ကိုရီးယားက တရုပ်ပြည်ပြင်ပမှာ ကူးစက်မှုအများဆုံး။ ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် စစ်တပ်ကိုပါ အသုံးပြုလာရ။
• အီတလီက ဥရောပမှာ အများဆုံး။ ၆၅၀ ဖြစ်၊ ၁၇ ယောက်သေဆုံး။
• အီရန်မှာ ၅၉၃ ယောက်ဖြစ်။ ၄၃ ယောက်သေဆုံး။
• ကာတာမှာ ပဌမဆုံးလူနာတွေ့။
• အီကွေဒေါမှာ ပဌမဆုံးလူနာတွေ့။
• ယူကေမှာ ၃ ယောက်ထပ်တွေ့။ ပေါင်း ၂၃ ယောက်ရှိပြီ။
• တရုပ်ပြည်ကစက်ရုံတွေ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းလာ။
• ပြင်သစ်မှာ ၁၀၀ ဖြစ် ၂ ယောက်သေဆုံး။
Fever ဖျား 83%
Cough ချောင်းဆိုး 82%
Shortness of breath အသက်ရှူမဝ 31%
Muscle ache ကြွက်သာတွေနာ 11%
Confusion စိတ်မကြည်လင် 9%
Headache ခေါင်းကိုက် 8%
Sore throat လည်ချောင်းနာ 5%
Rhinorrhoea (runny nose) နှာရည်ယို 4%
Chest pain ရင်ပတ်နာ 2%
Diarrhea ဝမ်းပျက် 2%
Nausea and vomiting ပျို့အန် 1%
More than one sign or symptom ရောဂါလက္ခဏာတခုမကရှိသူ 90%
Incubation Period ရောဂါပိုးဝင်ခံရပြီးနောက် ရောဂါလက္ခဏာပေါ်လာချိန်2- 14 ရက်။0- 27 ရက်လည်း ဖြစ်နိုင်။
Mortality Rate သေဆုံးမှုနှုန်း (တရုပ်ပြည် ၂၀-၂-၂၀၂၀နေ့)
သတင်းတွေ စာရင်းတွေ ပုံတွေ လင့်တွေ လာမတင်ကြစေလိုပါ။ အပြုသဘောမဆောင်တဲ့ ကွန်မင့်တွေကို ဖျက်ပါမယ်။ ဆောရီး။ မြန်မာပြည်က ထူးတဲ့သတင်း မရှိပါ။
နေ့ ၃ နာရီ ၅၁ မိနစ်။
၁။ ဆရာရှင့် မိဘ ၂ ပါးလုံး Rh positive ဖြစ်ပြီး ကလေးတွေမှာ Rh negative ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းလေးပါ ပြောပြပေးလို့ ရမလားရှင့်။ မိဘနှစ်ပါးလုံး rh positive ပါ။ မောင်နှမ ၃ ယောက်မှာ ၂ ယောက်က negative ဖြစ်ပြီး တယောက်က positive ပါ။
လူတိုင်းကို သွေးအုပ်စုခွဲရင် တစုံစီသိလာမယ်။ A, B, O, AB နဲ့ + သို့မဟုတ် - ဖြစ်တယ်။ - ဆိုတာ Rh အုပ်စုခွဲတာ ဖြစ်တယ်။ A, B, O, AB လေးစုလုံးမှာ + နဲ့ - ရယ်လို့ လေးမျိုးရှိတယ်။ အဲတော့ စုစုပေါင်း ရှစ်မျိုးလို့ပြောနိုင်တယ်။
Rh status ဆိုတာ မိဘနှစ်ပါးဆီကနေ ဗီဇအမွေရလာတာဖြစ်တယ်။ မိဘတွေမှာ သွေးအုပ်စုမတူတာတွေဖြစ်ဘို့များတယ်။ နှစ်ယောက်လုံးဆီကနေရမယ်။ dominant Rhesus D antigen ခေါ်မျိုးဗီဇကို မိဘတယောက်ဆီကနေရလာမယ်ဆိုရင် အဲဒီကလေးဟာ Rh-positive ဖြစ်ဘို့ ၈၅% ရှိတယ်။ အဲလိုမရသူမှာ Rh-positive ဖြစ်ဘို့ ၁၅% သာရှိမယ်။
မိဘနှစ်ယောက်လုံးက Rh-positive ဖြစ်နေပြီး၊ ကလေးဟာ Rh-negative ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မိဘနှစ်ယောက်လုံးက Rhesus D မရှိသူတွေဖြစ်နေလိမ့်မယ်။
Rh blood group system အာရ်အိတ်ခ်ျ သွေးအုပ်စုခွဲနည်းစနစ်
မင်္ဂလာပါဆရာ ကျွန်မ မိတ်ဆွေရဲ့ သမီးလေးက မျောက်သွေးလို့ ပြောပါတယ် အဲ့ဒီမျောက်သွေးပိုင်ရှင်ကလေးတွေက တချက်မှအငြိမ်မနေတက်ဘူး အိမ်ထောင်ပြုရင်သားမမွေးနိုင်ဘူးလို့ ပြောပါတယ် ကျွန်မအနေနဲ့ မျောက်သွေးအကြောင်းကို သိချင်ပါတယ်ဆရာ စာတွေရှာဖတ်တော့လဲ မိဘ၂ ပါးမှာ တယောက်က RH- တယောက်က RH+ ဆို ကလေးမှာ အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေဘဲတွေ့နေရပါတယ်ဆရာ မျောက်သွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှင်းပြပေးဆရာ
Rh blood group ကို ဘာသာပြန်တော့ ရီးဆပ်စ်မန်းကီးသွေး။ ကျွန်တော်ကတော့ တခါမှ အဲလိုမသုံးပါ။ အဲတာ (+) ဖြစ်လို့ ပိုမဆော့ပါ။ မိန်းကလေးမှာ ပိုအရေးကြီးတယ်။
Blood Type Incompatibility သွေးအုပ်စုနှင့် ကလေးအသားဝါခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2016/08/blood-type-incompatibility.html
Matching blood group before marriage လက်မထပ်ခင် သွေးအုပ်စု စစ်ဘို့ အရေးကြီးသလား https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/matching-blood-group-before-marriage.html
Rh factor and pregnancy ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ Rh သွေးအုပ်စု http://doctortintswe.blogspot.com/2016/09/rh-factor-and-pregnancy-rh.html
Rh Groups မိဘသွေး ကလေးသွေး https://doctortintswe.blogspot.com/2017/11/rh-groups.html
ချစ်သူတယောက် ရန်သူတရာအောက်မှာ မေးတယ်။ ငတက်ပြားလို့ဘဲ သိခဲ့တာ တဲ့။
ငတက်ပြား နဲ့ ငတက်ဖြား၊ ဦးစံရှား နဲ့ ဦးရှံစား၊ ဦးသိန်းမောင် နဲ့ ဦးဒိန်းဒေါင်။
အင်းဝသတိုးမင်းဖျားလက်ထက်က စစ်ကိုင်းမှာ အလွန်ထင်ရှားတဲ့ သူခိုးကြီးငတက်ပြားရှိခဲ့တယ်။ အဲတာကို ကာတွန်း မောင်လွင်က သူခိုးကြီးငတက်ဖြားလို့ ကာတွန်းစာအုပ် ထုတ်ပါတယ်။ ကောင်းတယ်။
Sherlock Holmes ရှားလော့ဟုမ်း ရေးသားတဲ့ စုံထောက်ဝတ္ထုတွေထဲမှာ ရှားလော့ဟုမ်းနဲ့ လက်စွဲတော် Dr. Watson ဒေါက်တာဝပ်ဆင်တို့ကို ရွှေဥဒေါင်းကဘာသာပြန်တော့ ဦးစံရှား နဲ့ ဦးသိန်းမောင်ဖြစ်လာတယ်။ ကောင်းတယ်။
အဲတာကို ကာတွန်းအောင်ရှိန်က ဦးရှံစားနဲ့ ဦးဒိန်းဒေါင် လို့ ကာတွန်းတွေ ရေးပါတယ်။ ကောင်းတယ်။
မူရင်းစာအုပ်တွေရော ဘာသာပြန်တွေရော ကာတွန်းတွေပါ နာမည်ကြီးတယ်။ Sherlock Holmes အင်္ဂလိပ်လိုစာအုပ်ကို အကြိမ်များစွာ ထပ်ထပ်ထုတ်တယ်။ စပယ်လင် မပြင်ပါ။ ဦးစံရှားကိုတော့ ရွှေဥဒေါင်းထက် မြန်မာစာတော်သူတွေက သတ်ပုံပြင်ကြတယ်။ မြန်မာစာလောကမှာ သူခိုးတက်ပြားရှိတယ်။ မကောင်းပါ။
ဆရာရေ အဲ့လိုတွေတင်နေတယ် အမှတ်မှားပြီး လူတွေပေါ့ဆမှာ စိုးရိမ်တယ်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က အဲယားကွန်ကြောင့်လို့ရေးတာကို ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ဆိုင်တာကို အဲလိုဟာတွေ တမျိုးပြီးတမျိုး၊ တယောက်ပြီးတယောက် အမှားတွေ မမှန်တာတွေ လိမ်ညာတောတွေ တင်နေကြတယ်။ တခုစီကိုတော့ ပြန်မရေးအားပါ။ အချက်အလက်မှန်တာ နည်းလမ်းမှန်တာတွေကို ၄-၁-၂၀၂၀ နေ့ကတည်းက နေ့တိုင်းတင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ လူလိမ်တွေများတယ်။ လူလိမ်ပွဲစားခေါ် မမှန်တာကို ပို့ကြ ဝေကြသူတွေလည်းများတယ်။ အလိမ်ခံနေရမှန်း မသိသူတွေကလည်း အတော်ကိုများတယ်။ လူ အချိန် ပိုက်ဆံကို မှန်တဲ့နေရာမှာ သုံးတတ်သူ နည်းနေတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ လူလိမ်အများဆုံး။
ကြက်သွန်နီစား၊ အရက်သောက်၊ ရေသောက်၊ အပူချိန်၊ ဟိုက်ပိုသီးဆစ်၊ အဲယားကွန်း၊ လာဦးမယ်။
ကျွန်တော် သူငယ်တန်းတက်တော့ ၁၉၅၄-၅၅ ခုနှစ်။ ဆယ်တန်းရောက်တော့ ၁၉၆၄-၆၅ ခုနှစ်။ အခုဆို နှစ်တွေ ကြာလှပြီ။ ကျောင်းမှာသင်ပေးတဲ့ ဘာသာရပ်တွေက ဟိုအရင်ကအတိုင်း။ မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ ပထဝီ၊ သမိုင်း။ စိတ်ကြိုက်မြန်မာစာ၊ ပန်းချီ စသည်။ ဝိဇ္ဇာဘာသာတွဲနဲ့ သိပ္ပံဘာသာတွဲက ဆယ်တန်းလောက်ရောက်မှ ဖြစ်လာတယ်။ အိန္ဒိယမှာနေခဲ့ရစဉ်က မြန်မာပြည်က ကျောင်းတွေမှာ သင်ပေးတာနဲ့ မတူတာတွေ တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ယူအက်စ်အေ ရောက်ပြန်တော့ အတော်ကို မတူတာတွေ တွေ့ရပြန်တယ်။
Grade5၅ တန်း
1. Art အနုပညာ
2. English Language Arts အင်္ဂလိပ်စာ
3. Health and Life Skills ကျန်းမာရေး
4. Mathematics သင်္ချာ
5. Music ဂီတ
6. Physical Education အားကစား
7. Science and Social Studies သိပ္ပံ နှင့် ဆိုရှယ်ဘာသာရပ်
8. additional optional subjects အပိုဆောင်းဘာသာရပ်
Social studies ဆိုရှယ်ဘာသာရပ် ထဲမှာ primarily history သမိုင်း၊ geography ပထဝီ၊ civics စီးဗစ်၊ economics စီးပွါးရေးနဲ့ sociology ဆိုရှယ်ဗေဒတွေပါတယ်။
Grade 10 Courses Summary ၁၀ တန်း
1. English Language Arts အင်္ဂလိပ်စာ၊
2. Social Studies ဆိုရှယ်ဘာသာရပ်
3. Mathematics သင်္ချာ
4. Science သိပ္ပံ
5. Physical Education အားကစား
6. Career Life Education ဘဝရှေ့ရေး
7. Fine Arts and/or an Applied Skills အနုပညာ
8. One elective စိတ်ကြိုက်ဘာသာရပ်
Career Education ဆိုတာ ကျောင်းသားတွေကို အောင်မြင်၊ ပညာတတ်တဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်လာစေရေဒအတွက် သင်ပေးတာ။ ဘဝခရီးမှာ ကိုယ်နှစ်သက်ရာ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ပန်းတိုင်ဆီကို စီမံလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြစေဘို့ဖြစ်တယ်။ တဦးချင်း စိတ်ဝင်စားမှု၊ စာနာစိတ်၊ ပြည့်ဝခြင်းတွေပါတယ်။
Basic 12th Grade Curriculum ၁၂ တန်း
1. English အင်္ဂလိပ်စာ
2. Mathematics သင်္ချာ
3. Science Physics or Science Elective ရူပဗေဒ သို့မဟုတ် ရွေးချယ်သိပ္ပံဘာသာရပ်
4. Social Studies (Economics) ဆိုရှယ်ဘာသာရပ် (စီးပွါးရေး)
5. General Elective (Fine Arts/Music Technology/Computer Science/Physical Education) ရွေးချယ်ဘာသာရပ် (အနုပညာ/ဂီတ၊ နည်းပညာ/ကွန်ပြူတာ၊ သိပ္ပံ/အားကစား
6. Foreign Language (Spanish or French) နိုင်ငံခြားဘာသာစကား (စပိန် သို့မဟုတ် ပြင်သစ်)
General Electives ရွေးချယ်ဘာသာရပ်များ
1. Art Science & Health အနုပညာသိပ္ပံ နှင့် ကျန်းမာရေး
2. Criminal Justice ရာဇဝတ်တရားမျှတမှု
3. Business & Entrepreneurship စီးပွါးရေး နှင့် စွန့်ဦးစီးပွါးရေးလုပ်ငန်း
4. Internet Technologies & New Media အင်တာနက်နည်းပညာ နှင့် မီဒီယာသစ်
5. Health Sciences ကျန်းမာရေးသိပ္ပံ
ပညာရေးမှာ တာဝန်ရှိသူတွေ၊ ကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသာတွေ စဉ်းစားနိုင်ကြစေဘို့ တင်ပြပါတယ်။ တိုင်းသူပြည်သားတွေဟာ ပညာတွေ တစတစပိုပြီး တတ်မြောက်လာကြရပါမယ်။ ကနေ့လူငယ် နောင်ဝယ်လူကြီးဆိုတာ မပြောလည်း ကြီးပြင်းလာကြတာပါပဲ။ အနာဂတ်သည် လူငယ်တွေလက်ထဲမှာရှိသည်ဆိုတာလည်း မပြောလည်း ဖြစ်မှာ။ ဖြစ်သင့်တာက ပိုပြီးတတ်မြောက်သူတွေ၊ ပိုပြီးတော်တဲ့သူတွေ။
ကျွန်တော့်ဘဝခရီး ရှည်လှပြီ။ နောက်လူတွေက ပိုတော်လာကြသလား ခဏခဏစဉ်းစားမိတယ်။ ကောက်ချက် မချနိုင်ပါ။
လူတွေကို သိလိုရင် တိုင်းပြည်ကိုကြည့်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့နောက်မှာ မြန်မာပြည် ပိုပြီးတိုးတက်လာပါသလား။ အဲတာ ပညာနဲ့ဆိုင်တယ်။ ပညာကောင်းတွေ ပညာစစ်တွေ တတ်မြောက်တဲ့ မျိုးဆက်တွေ မွေးထုတ်နိုင်ကြပါစေသတည်း။
မဖြစ်သေးတာက ပညာရေးဌာနတခုတည်းနဲ့ မဆိုင်ပါ။ တိုင်းသူပြည်သား အားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်။
လယ်တီဆရာတော်ကြီးရေးသားတဲ့ သံဝေဂလေးချိုးကြီးကို တင်အပြီးမှာ အိမ်လာလည်ကြတဲ့ ကလေးတွေနဲ့အတူ။
သို့ပါမူလဲ၊ ပူနွယ်ဆွေးနွယ်၊ အရေးကျယ်တွေကို၊ အေးဖွယ်ထင်မှတ်။
တကျပ်ပြားငါးဆယ်နဲ့ တေး ၁၀၀၀ တအုပ်ဝယ်ရင် အဆိုတော် ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ခင်ယုမေ (မေ) ရောင်စုံပြက္ခဒိန်(၁၉၆၂) တချပ်လက်ဆောင်ရ။
ဖီဖါဥက္ကဋ္ဌ ဂီယာနီ အင်ဖန်တီနိုက ပြောလိုက်တာ။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် Euro 2020, 2022 World Cup နဲ့ Tokyo 2020 ခြေစစ်ပွဲတွေ မသေချာဖြစ်နေတယ်။
England နဲ့ Wales မိတ်ဖြစ်ပွဲရှိတယ်။ Scotland, Northern Ireland နဲ့ Republic of Ireland တို့က Euro 2020 ခြေစစ်ပွဲတွေရှိကြတယ်။
ဒီသီတင်းပတ်ကုန်မှာကစားမဲ့ ဆွစ်ဇာလန် ထိပ်တန်းအဆင့်ပွဲတွေ ရပ်နားလိုက်ရတယ်။
Tottenham အသင်းက Son Heung-min က တောင်ကိုရီးယားမှာ ခွဲစိတ်ကုပြီးပြန်လာတော့ သီးခြားနေထိုင်ရတယ်။
Newcastle နဲ့ West Ham အသင်းတွေက လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာ လက်ဆွဲနုတ်ဆက်တာ မလုပ်စေတော့ပါ။
မတ်လ ၂၆ နဲ့ ၃၁ ရက်တွေမှာ Euro 2020 ခြေစစ်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့ Scotland နဲ့ Israel ကစာရမယ်။ Northern Ireland နဲ့ Bosnia and Herzegovina ကစားရမယ်။ Republic of Ireland နဲ့ Slovakia ကစားရမယ်။
မတ်လ ၂၇ မှာ အင်္ဂလန်မှာ အီတလီလာကစားရမယ်။ နောက်လေးရက်မှာ Wales က Austria နဲ့ United States တို့နဲ့ မိတ်ဖြစ်ကစားရမယ်။
World Cup အာရှသင်းတွေခြေစစ်ပွဲတွေလည်းရှိတယ်။ Australia မှာ Kuwait နဲ့ကစာပြီး Hong Kong က Iran မှာကစားရမယ်။ မတ်လကုန်မှာ။
China ရဲ့ Maldives နဲ့ကစားမဲ့ပွဲကို Thailand ကိုရွှေ့ရတယ်။ အဲတာလည်း အင်ဒိုးကစားရမှာတဲ့။
တရုပ်ကလပ်သင်း Guangzhou Evergrande နဲ့ Shanghai Shenhua ပွဲ ရပ်ထားလိုက်ပြီ။
အီတလီ Italian Serie A ၅ ပွဲကို အင်ဒိုးသာကစားရမယ်။ Juventus နဲ့ Inter Milan တို့ပွဲလည်းပါတယ်။
စပန် La Liga ထဲက Valencia အသင်း လူအများနဲ့ထိတွေမှု မလုပ်စေတော့ပါ။
အင်္ဂလန် Premier League ကလပ်သင်းတွေက NHS နဲ့ အစိုးရ ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်တွေကို လိုက်နာကြရတယ်။
ကျန်းမာရေးဟာ ဘောလုံးပွဲထက် အရေးကြီးတယ်။ ကွန်မင့်မှာ မြန်မာ မြန်မာဆိုပြီး လာမရေးကြစေလိုပါ။ ကျန်းမာရေးဟာ မြန်မာစာလုံးရေးတာထက် အရေးကြီးတယ်။ ခိုင်မာသေချာတဲ့ မြန်မာပြည်သတင်းရှိရင် တင်ပါတယ်။
ည ၁၀ နာရီ ၁၇ မိနစ်။
ကြာတော့ ပြောချင်လာတယ်။ မေးခွန်းအဆုံးမှာ ဖြေပေးပါနော်လို့ထည့်ရေးကြတယ်။ စကားပြောရာမှာလည်း ရှင်လို့ မသုံးကြတော့ပြီလား မပြောတတ်။ သက်တူရွယ်တူချင်းသာ နော်လို့ရေးရ ပြောရတယ်။ ပိုဆိုးလာတာက ဟိုင်းတဲ့။ ကျွန်တော့်ကို ဆရာဝန်လို့တော့ သိမယ်ထင်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်ကြီးတာလည်း သိကောင်းသိပါမယ်။ နော် နဲ့ ဟိုင်းတာ မယဉ်ကျေးပါ။ ရှင် နဲ့ ရှင့် အသုံးက အင်မတန်ယဉ်ကျေးပြီး နားဝင်ချိုတယ်။ ဟိုရှေးကတည်းက ကဗျာလင်္ကာတွေမှာ သုံးခဲ့တယ်။
မပို၏သို့ ပို၏သို့ ။
ပန်းနံ့သင်းကို ချဉ်း၍ ချဉ်း၍
ဆောင်ကာ ဝှေ့ လျက်
မချို၏သို့ ချို၏သို့ ။
လှိမ့်၍လှိမ့်၍ လေအဝှေ့ ဝယ်
မပျို၏သို့ ပျို၏သို့ ။
မညို၏သို့ ညို၏သို့ ။ ။
နန်းညွန့်ဆွေကဗျာကို မူရင်းသတ်ပုံနဲ့တင်ပေးထားသူကို ကျေးဇူး။
အလွန်ကိုခေတ်မီကြတဲ့ ကဗျာဆရာတွေကတော့ တစ်စိမ့်စိမ့်နှင့်တဲ့။
အလွန်ကိုခေတ်မီကြတဲ့ စာရေးဆရာတွေကတော့ တစ်သိမ့်သိမ့်နှင့်တဲ့။
အလွန်ကိုခေတ်မီကြတဲ့ မြန်မာစာဆရာတွေကတော့ တစ်ငြိမ့်ငြိမ့်နှင့်တဲ့။
အလွန်ကိုခေတ်မီကြတဲ့ မီဒီယာတွေကတော့ တစ်ခြိမ့်ခြိမ့်နှင့်တဲ့။
• WHO က သတိပေးချက်အဆင့် ထပ်မြှင့်လိုက်။
• တကမ္ဘာလုံးမှာ စုစုပေါင်း ၈၃၀၀၀ ကျော်ပြီ။
• တရုပ်မှာ ၄၄ ယောက်ထပ်မံသေဆုံး။ စုစုပေါင်း ၂၇၈၈ ယောက်သေဆုံးပြီး။ တကမ္ဘာလုံးမှာ စုစုပေါင်း ၂၈၀၀ ကျော်ပြီ။
• တရုပ်ပြည်ပြင်ပက ၄၆ နိုင်ငံမှာကူးစက်မှုရှိ။ သေဆုံးသူ ၅၇ ယောက်ရှိပြီ။ ကူးစက်မှုရှိကြောင်း အကြောင်းကြားနိုင်ငံ ၅၀ ကျော်ပြီ။
• ၃၈၈ ယောက် ကူးစက်ခံထားရ။ အီရန်မှာ သေဆုံးသူ ၃၄ ယောက်ရှိပြီ။ ဘီဘီစီသတင်းထောက်အဆိုအရ သေဆုံးသူ ၂၁၀ ရှိပြီတဲ့။ အီရန်က သူ့နိုင်ငံငားတွေကို ကူဝိတ်က ပြန်ခေါ်ယူ။ အီရန်က သတင်းမှန် ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိလို့ ယူဆကြ။ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ရန်ဖက် အီရန်ကို ဒီအရေးမှာ ကူညီရန်အသင့်လို့ ပြောဆိုလိုက်။
• နိုင်ဂျီရီးယားမှာ ပဌမဆုံးလူနာတွေ့ရှိ။
• ပြင်သစ်မှာ လူနာသစ် ၁၉ ယောက်။ ပေါင်း ၅၇ ယောက်ကူးစက်ခံထားရ။
• ရုရှားကနေ နိုင်ငံခြားသား ၈၈ ယောက်ကိုပြန်ခိုင်း။ သီးခြားထားစည်းကမ်း မလိုက်နာကြလို့ဖြစ်။
• ယူကေဝန်ကြီးချုပ်က ဦးစားပေးလုပ်ငန်းလို့ ပြောဆိုလိုက်။
• အီတလီမှာ သေဆုံးသူ ၂၁ ယောက်ရှိသွားပြီ။ ကူးစက်ခံရသူ ၈၈၈ ယောက်။ ၄၆ ယောက်သက်သာပြီ။ မြောက်ပိုင်းအီတလီမှာ သေဆုံးသူ ၁၇ ယောက်။
• အီးယူ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးတွေ မတ်လ ၆ ရက်နေ့မှာ အထူးအစည်းအဝေးကျင်းပမယ်။
• အမေရိကန်အရာရှိတွေက ကိုရိုနာကူးစက်မှု နောက်နှစ်အထိကြာနိုင်လို့ ပြောဆိုလိုက်။ အမေရိကန် အိမ်ဖြူတော်က မီဒီယာတွေကို ပြစ်တင်လိုက်။ အမေရိကားမှာ ကာကွယ်ဆေးထုတ်နိုင်ရေး လုံးပမ်းနေ။
• ဒိုင်းမွန်းပရင့်ဆက်သင်္ဘောခရီးသည် ဗြိသိသျှသားတဦး သေဆုံး။
• ရိုမေးနီးယားမှာ လူနာသစ် ၂ ယောက်ထပ်တိုး။
• ကင်ညာတရားရုံးက တရုပ်သွားလေယာဉ်တွေ ရပ်ဆိုင်းမိန့်ထုတ်လိုက်။
• ဂျာမဏီမှာ ကူစက်တာသေချာသူ ၆၀ ရှိပြီ။
• ဘယ်လ်ဂျီယမ်လေကြောင်းလိုင်းက အီတလီခရီးစဉ် ၃၀% လျော့ချလိုက်။
• ဂျပန်မြောက်ပိုင်း Hokkaido မှာ အရေးပေါ်ကြေညာ။
• အစ်ဇရေးလ်မှာ လူနာနံပတ် လေးတွေ့ရှိ။
• ပြင်သစ်နိုင်ငံ Nice မှာ ပဌမဆုံးလူနာတွေ့ရှိ။
• ယူကေ ဝေးလ်စ်မှာ ပဌမဆုံးလူနာတွေ့ရှိ။ ယူကေမှာ စုစုပေါင်း ၁၉ ယောက်။
• ဧည့်သည်တွေမှာ ပိုးတွေ့လို့ Abu Dhabi ဟော်တယ် ၂ ခုကို သီးခြားခွဲထားလိုက်ရ။
• Canary Islands ဟော်တယ်မှာ တည်းခိုနေသူတွေ အိမ်ပြန်ကြ။
• ပါကစ်စတန်မှာ နှာခေါင်းစည်းဝယ်ရခက်ခဲလာ။
• ဂျော်ဂျီယာမှာ ဒုတိယလူနာတွေ့။
• ထိုင်းမှာ ၄ ၁ယောက်ရှိပြီ။
• နယ်သာလန်မှာ ဒုတိယလူနာ။
• ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ခရီးစဉ်တချို့ ဖျက်သိမ်းလိုက်။
• ဆွစ်ဇာလန်မှာ လူ ၁၀၀ ပါဝင်တဲ့ အစီအစဉ်အကြီးစားတချို့ ဖျက်သိမ်းလိုက်။ မတ်လ ၁၅ ရက်အထိ။
• သဘောင်္ဆင်း တောင်အာဖရိကသား ၂ ယောက် ပိုးတွေ့ရှိ။
• တရုပ်ပြည်ကပြန်လာတဲ့ မွန်ဂိုးလီးယား သမတ Khaltmaagiin Battulga သီးခြားခွဲထားရ။
• ဘိုင်လိုရပ်စ်မှာ ပဌမလူနာတွေ့ရှိ။
• အိုက်စလန်၊ နိုင်ဂျီးရီးယား၊ နယူးဇီလန်၊ ဘိုင်လိုရပ်စ်နဲ့ နယ်သာလန်မှာ ပဌမဆုံးလူနာတွေရှိရှိလာရ။
• ဆီးရီးယားမှာတွေ့တာ သတင်းတွေထဲ မပါသေး
• စီးပွါးရေး ထိခိုက်လို့ ဆွစ်ဘဏ်ကပြောဆိုလိုက်။ ကမ္ဘာ့စီးပွါးရေးထိခိုက်လာ။ လန်ဒန် FTSE မှာ £210bn ($267bn) ဘီလီယန် တန်ဖိုးကျ။ Dow Jones မှာ အမှတ် ၁၀၀၀ ကျဆင်း။ Standard & Poor’s နဲ့ Nasdaq composites တို့မှာ ၂% နဲ့ ၁့၃% ကျဆင်း။ ၂၀၀၈ စီးပွါးရေး နိမ့်ကျမှုကြီးလိုဖြစ်မလား စိုးရိမ်ရ။ တရုပ်၊ ဂျာမဏီနဲ့ ပြင်သစ်တို့မှာတော့ မကျဆင်းပါ။
• တရုပ် အွန်လိုင်း ဗိုင်ရပ်စ် ဂိမ်းကို ပိတ်လိုက်ပြီ။
၁။ လက်မကြာခဏ ဆေးပါ။ ဆပ်ပြာနဲ့ရေ သုံပါ။ ဆင်နီတိုက်ဇာ လက်ဆေးရည်ရှိလျှင် သုံးပါ။
၂။ ချောင်းဆိုး နှာချေတိုင်း တစ်ရှူးစနဲ့ ဖုံးပါ။
၃။ တစ်ရှူးကို စနစ်တကျ စွန့်ပါ။
၄။ တစ်ရှူးမရှိလျှင် တံတောင်ဆစ်ထဲမှာ ချောင်းဆိုး နှာချေပါ။
၅။ အပြင်ကို တတ်နိုင်သမျှ မထွက်ပါနှင့်။ ထွက်ရလျှင် နှာခေါင်စည်းသုံးပါ။
သတင်းတွေ စာရင်းတွေ ပုံတွေ လင့်တွေ ကွန်မင့်မှာလာတင်ရင် ဖျက်ပါမယ်။ ဆောရီး။
ညနေ ၆ နာရီ ၅၄ မိနစ်။Coronavirus ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အပ်ဒိတ်
• တကမ္ဘာလုံးမှာ ကူးစက်ခံရသူ စုစုပေါင်း ၈၃၀၀၀ ကျော်ပြီ။
• တရုပ်မှာ ၄၄ ယောက်ထပ်မံသေဆုံး။ စုစုပေါင်း ၂၇၈၈ ယောက်သေဆုံးပြီး။ တကမ္ဘာလုံးမှာ သေဆုံးရသူ စုစုပေါင်း ၂၈၀၀ ကျော်ပြီ။
• ၃၈၈ ယောက် ကူးစက်ခံထားရ။ အီရန်မှာ သေဆုံးသူ ၃၄ ယောက်ရှိပြီ။ ဘီဘီစီသတင်းထောက်အဆိုအရ သေဆုံးသူ ၂၁၀ ရှိပြီတဲ့။ အီရန်က သူ့နိုင်ငံသားတွေကို ကူဝိတ်က ပြန်ခေါ်ယူ။ အီရန်က သတင်းမှန် ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိလို့ ယူဆကြ။ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ရန်ဖက် အီရန်ကို ဒီအရေးမှာ ကူညီရန်အသင့်လို့ ပြောဆိုလိုက်။
• ဂျာမဏီမှာ ကူးစက်တာသေချာသူ ၆၀ ရှိပြီ။
• ဂျပန်မြောက်ပိုင်း Hokkaido မှာ အရေးပေါ်ကျေညာ။
• ဆီးရီးယားမှာတွေ့တာ သတင်းတွေထဲ မပါသေး။
ညနေ ၆ နာရီ ၅၄ မိနစ်။
ဆရာရှင့် ကျွန်မသားလေးအသက် ၁နှစ်နဲ့ ၇လပါ လိင်တံအရေပြားရှည်လို့ ဖြတ်ထားတာ ၂ပတ်ရှိပါပြီ အနာက မကျက်တဲ့အပြင် လိင်တံထိပ်လေးမှာ ပြည်လေးတွေပါတည်နေပါတယ် infection ဝင်တာလားရှင် ပိုးသတ်ဆေး သောက်ရုံနဲ့ အဆင်ပြေပါ့မလားရှင် တခုခုဖြစ်သွားမှာ အရမ်းစိုးရိမ်လို့ ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေပေးပါဦးနော်
Cipladine စီပလာဒင်းဟာ အနာထည့်ဆေးဖြစ်တယ်။ ဆေးရည်နဲ့ ညှစ်ဗူးရှိတယ်။ ဆေးရည်ကို မွေးစကလေးချက်ကို ထည့်ရတယ်။ ကလေးအသက်ပေါင်းများစွာကို ကယ်နိုင်တယ်။
Antisepti and disinfectant agent လို့ခေါ်တယ်။ ပိုးသန့်ဆေးဖြစ်တယ်။ အနာတွေ ဒဏ်ရာတွေအတွက် သုံးတယ်။ ဒဏ်ရာက မသန့်ရင် အရင်သန့်အောင်လုပ်ပေးရမယ်။ သန့်တယ်ဆိုတာ အမျိုးမျိုး။ ဖယ်သင့်တာရှိရင် ဖယ်ရှားရမယ်။ ဆပ်ပြာနဲ့ရေး ဆေးရတာရှိတယ်။ အနာဘေးကနေ အရက်ပျံလိမ်းရတာရှိတယ်။ အနာဒဧ်ရာထဲ အရက်ပျံ မထည့်ရ။
မေးခွန်းပါကလေးလို ပန်းအဖျားခွဲစိတ်တာမှာ ဆီးက အမြဲစိုနေတယ်။ ဆီးသွားပြီးတိုင်း ခြောက်သွေ့စေပြီး အခုဆေးထည့်ရမယ်။
အနာ ဒဏ်ရာတွေမှာ ဆေးထည့်တာနဲ့ လုံလောက်တာရှိတယ်။ တချို့ကို ပဋိဇီဝဆေး ခေါ် ပိုးသေဆေး စားဆေးဖြစ်ဖြစ် ထိုးဆေးဖြစ်ဖြစ် လိုတယ်။ အနာ ဒဏ်ရာတိုင်း ပါရာစီတမော သို့မဟုတ် အိုင်ဘူပရိုဖင် လိုတယ်။ အနာသက်သာစေမယ်။ ရောင်တာသက်သာစေမယ်။ ဖျားရင် အပူကျစေမယ်။ ကလေးတွေ အသက်အရ ပေးရတယ်။
Phimosis and Circumcision ပန်းအဖျား လှီးဖြတ်ပေးခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2016/10/phimosis-and-circumcision.html
Surgical wound care ခွဲစိတ်နာ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/surgical-wound-care.html
မင်္ဂလာပါဆရာ သမီး အသက်က၂၅နှစ်ပါ သမီး မူးနေတာ ၁၀ လရှိပါပြီဆရာ သမီးဒုတိယ ကိုယ်ဝန် ၅လကတည်းက မူးတာပါ OGနဲ့ အထွေထွေက သိုင်းရွိုက်လည်းပင်းကျီးပေါင်း သွေးအားနည်းတွေ စစ် ခိုင်းပါတယ် အဖြေက အကုန် ကောင်းတယ်ပဲထွက်ပါတယ် မူးတာကမသက်သာတော့ သမီး စိုးရိမ်လာခဲ့တယ် ခေါင်းကို CT ရိုက်ဖို့ လုပ်ချင်နေမိတယ် ဒါပေ့မယ့် ကိူယ်ဝန်နဲ့မို့ ရိုက်မရတော့ ကလေးမွေးပြီးတဲ့အချိန် ထိမူးတဲ့ဒဏ်ကိုခံခဲ့ရတယ် ကလေးမွေးပြီး ၂ပတ်လောက်ကြာတော့ CT ကော MRI ပါရိုက်တယ် အဖြေကကောင်းတယ်တဲ့ဆရာ အဲ့ဒါနဲ့ ဦးဏှောက်နဲ့ အာရုံကြောဆရာမက ZIGO 0.8mg x-nex ပေးပါတယ် ကလေးမွေးရင်းနှလုံးအစို့ အနည်းငယ်ဟနေလို့ corbis ပါ သောက်ရပါတယ်ဆရာ အဲ့ဒါပဲစွဲသောက်လာခဲ့တယ်ဆရာ မူးတာသက်သာလိုက် ပြန်ဖြစ်လိုက်ပဲဖြစ်နေတယ် အခုဒီရက်ပိုင်းထဲ ဘယ်လိုမူးလဲဆိုတော့ဆရာ ထိုင်နေရင်း ခေါင်း အလှည့်အပြုတွေမှာရုတ်တရက်ဆိုသလို မျက်လုံးဝေဝါးပြီးမူးပါတယ် ပန်းကန်ဆေးတဲ့အခါ ခေါင်းငုံတဲ့အခါ လှေကားအဆင်းတွေဆို ရိပ်ခနဲမူးပါတယ်
အိပ်တဲ့အခါတွေဆိုလည်း ဘယ်ဘက်ကို လှည့်အိပ်ရင်မူးပါတယ် မတ်တပ်ရပ်ရင်လည်း ၅မိနစ်ထက် ပိုမရပ်နိုင်ဘူး မူးလာပြီး ယိုင်တော့မလိုလိုတွေ ခံစားရပါတယ် ထိုင်တဲ့အခါတွေဆိုလည်းအမှီမပါပဲမထိုင်နိုင်ပါဘူးဆရာ တံမြက်စည်းလှဲရင်လည်း အောက်ကိုငုံ့ကြည့်တာက ကြမ်းပြင်ကရွေ့သလို မြင်သလိုနိမိ့သလို့ မျိုးစုံ ခံစားရပါတယ် ဆရာ
ကျေးဇူးပြုပြီးသမီး ဘယ်အပိုင်းကို စစ်ဆေးရမလဲဆရာ
မေးခွန်းရှည်ကို ၂ ခါပို့တယ်။ ဆေးကို စမ်းသပ်ကုသပေးတဲ့ဆရာဝန်ညွှန်ရင် သောက်နိုင်။
Meclizine 25 mg ဆေး တနေ့ ၁-၂-၃ ကြိမ်သောက်နိုင်။ သက်သာလာရင် ၁-၂ ကြိမ်။ နောက် ရပ်ထားနိုင်။
အင်္ဂလိပ်စာ အင်္ဂလိပ်စကား လုံးဝမပြောရဆိုတဲ့သတင်း ဟုတ် မဟုတ်တော့ မသိပါ။ တွေ့နေရတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဆယ်တန်းရောက်တော့ သိပ္ပံဘာသာတွဲကို အင်္ဂလိပ်လိုသင်နေတယ်။ နှစ်လလောက်နေတော့ အင်္ဂလိပ်လိုမသင်ရ အမိန့်လာတယ်။ အဲဒီနောက် ကျောင်းသားတွေ အင်္ဂလိပ်စာညံ့ညံ့လာတယ်။ ညံ့တဲ့သူတွေက ဆရာတွေဖြစ်လာကြတယ်။
မကြာသေးခင်မှာ အင်္ဂလိပ်စာ တခေတ်ဆန်းလာပါတယ်။
၂၀၁၂ သြဂုတ်လမှာ ပြည်ပရောက်နေသူတွေကို အမည်မည်းစာရင်းကနေ ပယ်ဖျက်တော့ ဘလက်လစ်လို့ အင်္ဂလိပ်လို ရေးတယ်။ သမ္မတရုံးဝဘ်ဆိုက်မှာ ရှိတယ်။
အခုခေတ်မှာ တရားဟောတာထဲမှာ အင်္ဂလိပ်စာလုံးမပါရင် ပရိသတ်က သိပ်အထင်မကြီးချင်ကြ။
ရုံးစာတွေမှာ အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေ ပါလာပြီ။ အခုအစိုးရလက်ထက် အင်္ဂလိပ်စာလုံးသုံးတာတွေ ပိုများလာတယ်။ ဖတ်တဲ့သူတွေကလည်း အဲလိုရေးမှ နားလည်ကြပုံရတယ်။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးအုပ်စုလို့ ပြောင်းမလား။ အင်နယ်လ်ဒီလည်း ဂွကျပြီ။
ပိုညံ့တဲ့သူက ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာတယ်။
ဆရာဝန်တွေ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ ကင်ဆာကို ဘယ်လိုရေးမလဲ ။ တီဘီ၊ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ဂွကျပြီ။
ကျွန်တော့်စာမှာ ဘိုစာလုံး မသုံးပါ။ နောက်လာမဲ့ ဆင်ဆာအဖွဲ့ကို ကြောက်လို့။
ဘယ်လ်ဂျီယမ်ကနေထုတ်တဲ့ Corona Beer ကိုရိုနာဘီယာကုမ္ပဏီဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ရောဂါဖြစ်လာလို့ ပေါင် ၁၃၂ သန်း ဆုံးရှုံးပါသတဲ့။
Corona ကိုရိုနာဆိုတာ ဘာလဲ
နက္ခတ်ဗေဒမှာ နေနဲ့ ကြယ်တွေဘေးက ဖုံးထားတဲ့နေရာကို ခေါ်တယ်။ နေကြတ်ချိန်မှာ မြင်နိုင်တယ်။
ပန်းတွေမှာလည်း အဲလိုပုံပန်းရှိတာကို ခေါ်တယ်။ Daffodil ခေါ် မတ်လမှာပွင့်တဲ့ပန်း။
ခန္ဓာဗေဒမှာ သရဖူလို ဖုံးနေတဲ့နေရာတိုင်းကို ခေါ်နိုင်တယ်။ (ကန်တော့) ကျားအင်္ဂါက ကွမ်းသီးခေါင်းကိုလည်း ကိုရိုနာလို့ပဲ ခေါ်ပါတယ်။ ကန်တော့။
Buddhan Whisky ဗုဒ္ဓဝီစကီ တရုပ်။ (ကန်တော့)
Old Monk Rum ဘုန်းကြီးအိုရမ် အိန္ဒိယ။ (ကန်တော့)
Tuborg Beer တူပို့ဘီယာက မြန်မာပြည်။ ဆောရီး သင်္ကြန်သီချင်း။
ဆရာ အနော်ရထာအကြောင်းလေးပါ ရေးစေချင်
အနော်ရထာအကြောင်းကို (ဒေါ်) ခင်မျိုးချစ် (၁၉၁၅ - ၁၉၉၉) က Anawratha of Burma စာအုပ်ရေးခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်း ထပ်ထုတ်တော့ King Among Men လို့ အမည်ပြောင်းထုတ်ပါတယ်။ ဘာမားစာလုံးက ဆင်ဆာနဲ့ ငြိနေလို့လား မသိပါ။
ကျွန်တော်က ရာဇဝင်ထဲက အနော်ရထာ (၁၀၄၄-၁၀၇၇) နဲ့ သာလွန်မင်း (၁၆၂၈-၁၆၅၆) တို့ကိုသဘောကျခဲ့တယ်။ အနော်ရထာကိုတော့ ပဌမမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ထောင်နိုင်သူနဲ့ အရည်းကြီးတွေကို ရှင်းနိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သာလွန်မင်းက နိုင်ငံကိုပြန်တည်ထောင်တယ်။ ၁၆၃၇ ခုနှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပဌမဆုံးလူဦးရေနဲ့ မြေယာစစ်တမ်း ကောက်ယူတယ်။ ချွေတာစုဆောင်းရေး အားပေးတယ်။
၁၁-၁၁-၂၀၁၄ နေ့က အနော်ရထာကယ်ပါလို့ ရေးခဲ့တယ်။ အမျိုးသမီးတွေ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း ပြုနိုင်ရန်အတွက် အပျိုစစ်ဦးရေ မည်မျှရှိသည်ကို မဘသ အဖွဲ့က စစ်တမ်းကောက်ဆိုတာ တွေ့လို့။ ဟုတ်တာ မဟုတ်တော့ မသိပါ။
မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမှာ ဘုရင်စုစုပေါင်း (၁၂ဝ) ပါးရှိတယ်။ စစ်အစိုးရကတော့ စစ်ဘုရင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ အနော်ရထာ၊ ဘုရင့်နောင်နဲ့ အလောင်းဘုရားတို့ကိုရွေးပြီး အရုပ်တွေနဲ့ ကိုးကွယ်ပါတယ်။
ဂျပန်မှာ အလုပ်လုပ်နေသူတယောက်က တစ်ရှူးတွေ ဝယ်မရတော့ဘူး၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့။
ဆောရီး။ ကိုယ့်ဆီမှာလို လက်ကိုင်ပဝါ၊ လက်သုတ်ပဝါလေးတွေ သုံးရမယ်။ ခဏခဏလျှော်ရမယ်။ အဲဒီမှာတော့ စက်နဲ့လျှော် စက်နဲ့ခြောက်။
လက်ဆေးပြီး၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးတိုင်း လက်သုတ်ရတယ်။ စိုထိုင်းနေတာကို ပိုးတွေက ကြိုက်တယ်။ အထူးသဖြင့် ဖန်းဂတ်စ် ခေါ် မှိုပိုး။ မိုးစိုစို မှိုကို သတိထား။
နှာချေတိုင်း ချောင်းဆိုတိုင်း ပါးစပ်နဲ့ နှာခေါင်းကို တစ်ရှူးနဲ့ ဖုံးအုပ်ထားရမယ်။ တစ်ရှူးကို စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ရမယ်။
လက်သုတ်ပဝါကိုလည်း အဲလိုသုံးနိုင်တယ်။ ချည်အစစ်လည်းရတယ်။ ရောထားတဲ့အဝတ်စလည်း ရပါတယ်။ မကြာမကြာ လျှော်ရမယ်။ ခြောက်အောင်ထားရမယ်။ တဦးစီသုံးတာ ပိုကောင်းတယ်။ စားပွဲ ခုံ စတဲ့ မျက်နှာပြင်တွေကိုလည်း မကြာခဏ သန့်ရှင်းပေးပါ။ ခြောက်သွေ့နေပါစေ။
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဘယ်မှာနေနေ နေကောင်းကြပါစေ။
ကျနော်ချောင်းဆိုးတာ နှစ်ပတ်ရှိပါပြီဗျ ဆေးခန်းကပေးတဲ့ဆေးတွေနဲ့မပျောက်သေးလို့ပါဆရာ ဆေးနည်းလေး ပေးပါဦးဆရာ လည်ချောင်းယားပြီးဆိုးတာပါဆရာ ချွဲသိပ်မထွက်ပါဘူးဆရာ
ကျနော်ဆိုသူ အသက် မသိ။
Common Cold အအေးမိရင် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/common-cold.html
Cough Question တခါတခါမှ ချောင်းဆိုးပါတယ် https://doctortintswe.blogspot.com/2018/10/cough-question.html
ဆရာမင်္ဂလာပါ ကိုရိုနာနဲ့ သင်္ကြန် ပတ်သတ်မှု ပြောပြပေးပါနော်
ကိုရိုနာနဲ့ သင်္ကြန် ပတ်သက်မှု မရှိသေး။
သင်္ကြန်က ရက်တွေလိုသေးတယ်။ အခုကတည်းက မဖြစ်တာတွေ မဟုတ်တာတွေနဲ့ ခြိမ်းခြောက်ပြီး လိမ်နေကြတယ်။
ကွန်မင့်တခု ရလို့ ရေးပါတယ်။ တန်ခူးမည်မွတ် ဖက်ဆွတ်ရေတိုး သင်္ကြန်မိုး မှတ် နဲ့ မွတ် ဘယ်စကားကအမှန်ပါလဲ ဆရာ။ လင်္ကာစပ်နည်းအရ မွတ်က အမှန်လို့ထင်ပါတယ်။ ကာရံလည်း သင့်ပါတယ် တဲ့။
မဟုတ်ပါ။ တန်ခူးမည်မှတ် ဖက်ဆွတ်ရေတိုး သင်္ကြန်မိုး ဖြစ်ပါတယ်။ မွတ်ဆိုတာ မွတ်သိပ် (ဆာလောင်)၊ မွတ်ညက် (ချောမွေ့)၊ မွတ်မွတ်ညက်ညက် (ချောချောမွေ့မွေ့)။
တက္ကသိုလ်စာသင်သားအမည်နဲ့ ဘလော့မှာလည်း နယုန်မိုးသေး မြက်သားမွှေးလို့ ရေးထားတာတွေ့တယ်။ ခက်ဆစ်အဖွင့် ထဲမှာလည်း မြက်သားမွှေး = မြက်နုကလေးများ ပေါက်လာသည်တဲ့။ မြက်သားမွေးဖြစ်ရပါမယ်။
မေးခွန်းတွေမှာလည်း မွေး နဲ့ မွှေး မှားကြတယ်။ မွေးဆိုတာ ကလေးမွေးသည်။ ကိုယ်မွေး။ ပန်းအနံ့ မွှေးသည်။
၁။ တန်ခူးမည်မှတ် ဖက်ဆွတ်ရေတိုး သင်္ကြန်မိုး
၂။ ကဆုန်အတွင်း မြေသင်းပျံ့ပျံ့ မိုးနှံ့နှံ့
၃။ နယုန်မိုးသေး မြက်သားမွေး
၄။ ဝါဆိုလပြောင်း မိချောင်းဖွေးဖွေး မိုးအေးအေး
၅။ ဝါခေါင်တကြောင်း ထနောင်းကြောင်ကျစ် ဆူးရစ်ပွင့်ကာ မိုးမရွာ ရွာပါသော်လည်း မိုးမသည်း
၆။ တော်သလင်းတိမ်ညို စားဖိုဆင်းရဲ မိုးမစဲ
၇။ သီတင်းကျွတ်တွင် ပလ္လင်ဆေးမိုး ရွာသွန်းဖြိုး
၈။ တန်ဆောင်းမုန်းတွင်း ဆီးနှင်းတဖြိုက် မိုးတလိုက်
၉။ နတ်တော်ရောက်ငြား မိုးသားမငြိမ် ဆင်ရာတိမ်
၁၀။ ပြာသိုချမ်းပြင်း ဆီးနှင်းရောယှက် နှမ်းပုံပျက်
၁၁။ တပို့တွဲ နွှဲ၍ရွာခြင်း သန်မိုးကြွင်း
၁၂။ တပေါင်းလည်းကူး မိုးသားကျူး
တ နဲ့ တစ်ကတော့ ပြောမရ။ မတတ်နိုင်။ အမိမြန်မာပြည်မှာ မိုးမှန်၊ သတ်ပုံမှန်၊ မြန်မာစာ မှန်လာပါစေသတည်း။
မင်္ဂလာပါဆရာခင်ဗျာ သတ္တမတန်း ဇာတက ဝတ္ထု သင်ရိုးထဲမှာ ပဉ္စဝုဓ မင်းသား ပဉ္စဝုဓ ဇာတ် လို့ ရေးထားပါတယ်။ ဘုရားဟော ငါးရာ့ငါးဆယ် နိပါတ်တော်ထဲမှာ ဖတ်ဖူးခဲ့တာ ပဉ္စာဝုဓ ဇာတ်တော်လို့ပဲ သိထားခဲ့တာပါဆရာ။ အခုက သင်ရိုးညွှန်းတမ်းမှာကတည်းက မှားနေတာလားဆိုတာ သိရပါရစေ ဆရာ။
၅၅၀ ဇာတ်တော်တွေတင်တဲ့နေရာမှာ အမှတ်စဉ် (၅၅) ပဉ္စာဝုဓဇာတ်လို့ တွေ့တယ်။ ကပ်စေးနှဲ ဘီလူးကြီးအား အရှုံးမပေးဘဲ ငါးပါးသော လက်နက်နှင့် တိုက်ခိုက်သဖြင့် အနိုင်ရသော ပဉ္စာဝုဓမင်းသား အကြောင်း။
ဝီကီပီးဒီးယားမှာ မုံရွေး ဇေတဝန်ဆရာတော် (မြန်မာ ၁၁၂၈ - ၁၁၉၆) ပြုစုတော်မူခဲ့သော ကျမ်းများထဲမှာ ၈၊ ပဉ္စဝုဓပျို့လို့ တွေ့တယ်။
ဦးအောင်ညွန့်ဝင်းရေးသားထုတ်ဝေထားတဲ့ ငါးရာ့ငါးဆယ် အနှစ်ချုပ်မှာ ၅၅၊ ပဉ္စာဝုဓဇာတ်လို့ တွေ့တယ်။
ဝီကီပီးဒီးယားမှာ အမှားတွေ မကြာမကြာတွေ့တယ်။ ဗိုလ်တထောင်ဘုရားကို တ စသတ်နဲ့ရေးထားတယ်။
၁။ ဆရာ အအေးမိရင်Dဆေးကောင်းပါလား
ဆေးသောက်လိုသူ ကလေး လူကြီး မသိ။ အသက် ကျား-မ မသိ။ D စာလုံးပါတိုင်း ဗီတာမင်ဒီလား အရင်စဉ်းစားမိတယ်။
၂။ ဆရာ 24ရECee2ကို ၂၅ရက်နေ့က သောက်ထားပါတယ် အခုထိရာသီမလာသေးဘူး စိုးရိမ်ရလား ၂၄ရက်နေ့က ဆက်ဆံpး အရင်ကဆို သောက်pး ၇ရက်နေရင်ရာသီလာပါတယ် ထပ်ခါထပ်ခါသောက်ရင် ဆေးသောက်လည်း ကိုယ်ဝန် ရနိုင်ပါလားဆရာ
၃။ ဆရာရှင့် သမီးရာသီလာတာမရပ်တာ ၂လလောက်ရှိပါpအခုထိမpသေးဘူးဆရာ သမီးဘာဆေးသောက်သင့်လဲဆရာ
၄။ ဆရာ ခလေးက ၁၅ရက်ပဲရှိသေးတယ် ချွဲတွေ့အရမ်းကျပ်နေလို့ ချောင်းလဲဆိုး ဆေးခန်းပြနေတာ၃ရက်ရှိp မသက်သာဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာ ခလေးနေရခက်နေလို့ဆရာ နှာခေါင်းပိတ်နေတာ
၅။ ဆရာရှင့် dည အသက်ရူရခက်ပြန်ပပီ နှာခေါင်းတစ်ဖက်ပိတ်ပြီး ရူကြည့်တော့ ဘယ်ဘက်နှာခေါင်းကပိတ်ပြီး လေမဝင်ဘူး ညာဘက်ကျဝင်တယ်ဆရာ ပိတ်တဲ့ဘက်ကိုအားစိုက်ရူကြည့်တော့ ခေါင်းထဲကလေခန်းသလိုဖြစ်ပါတယ် အသက်ရူရင်ပါးစပ်ကတောင် ပြင်းပြင်းရူနေရပါတယ် ဘာရောဂါပါလည်းဆရာ ညဘက်တွေအိပ်မပျော်ဘူး
၆။ မင်္ဂလာပါဆရာ ကလေးကမွေးထားတာ၁၆ရက်ရှိပါp ကလေးမှာ G6pT ချို့တဲ့တယ်တဲ့ G6pt က ဘာရောဂါလဲဆရာ
၇။ ဆရာ ကျွန်တော့်မိန်းမ အသက်၂၂ရှိပါp ဆရာ လစဉ်သုံးသန္ဓေတားဆေးကဒ်သောက်တာ စသောက်သောက်ချင်း ခေါင်းနည်းနည်းမူးတယ်ဆရာ pတော့ နဖူးပြင်မှာ ဝက်ခြံလိုမျိုး အဖုသေးသေးလေးတွေ ထွက်တယ်ဆရာ ကျွန်တော့်မိန်းမ ဒီထက်ပိုp ဘာတွေဖြစ်နိုင်သေးလဲ ဆရာ pတော့ လစဉ်သုံးသန္ဓေတားဆေးကဒ်ကို ဆက်တိုက်သင့်လားမသင့်လား လမ်းညွှန်ပေးပါဦးဆရာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ
၈။ မင်္ဂလာပါဆရာ ရင်သားကင်ဆာနဲ့ ပက်သက်p မေးချင်လိုပါ နို့ သီးခေါင်းအောက်ကနေ နာနေတယ် နှစ်ရက်ရှိp သားဆက်ခြားလို့သာ ရေးရတယ်။ စပ်ဆိုတာ ရောစပ်တာ။ ဆက်ဆိုတာမျိုးဆက်။
၉။ ဆရာရာသီမလာ၂လပြည့်ပါpနေလို့မကောင်းဘူးဆရာ ယောကျာ်းနဲ့အတူနေပါတယ်
၁၀။ မင်္ဂလာပါဆရာ ကလေးကမွေးထားတာ၁၆ရက်ရှိပါp ကလေးမှာ G6pT ချို့တဲ့တယ်တဲ့ G6pt က ဘာရောဂါလဲဆရာ
၁၁။ သမီးအသက် ၂၄နှစ်ပါ။ ဗဟန်းမြို့နယ်မှာနေပါတယ် ဆရာ။့့ သမီးဝမ်းချုပ်တဲ့ရက်ဆို ရင်ပြည့်p အကက်ရှုမဝသလိုဖြစ်ပါတယ်
မေးခွန်းတွေက နမူနာသာဖြစ်တယ်။ B လို့ရေးတိုင်း အသဲရောင်ဘီကို အရင်စဉ်းစားမိတယ်။ D ဆိုရင်လည်း ဗီတာမင်ဒီ။ P ဆိုတာ Prostitute ခန္ဓာကိုယ်ကို အခကြေးငွေနဲ့ရောင်းတဲ့အသက်မွေးမှုက မိန်းကလေးတွေကို ခေါ်တယ်။ ကန်တော့။
- မြန်မာစာ P
- အမက AIDS
မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID -19 ကူးစက်မှုဆိုးရွားစွာ မဖြစ်သေးတာက တချိန်တုန်းက လင်းနို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဂါခံစားခဲ့ကြရလို့လားမသိဘူးဆရာ သမိုင်းအတိအကျတော့ မသိပေမယ့် ကျနော်တို့အလယ်ပိုင်းမှာ လင်းနို့တွေအိမ်ထဲဝင်ရင် ပိုးချတယ်ဆိုပြီး မောင်းထုတ်ကြတာ လင်းနို့ကိုကြောက်လန့်ကြတာ အဲဒီအချက်က ရှေးလူကြီးတွေမှာ လင်းနို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဂါတွေများ ခံစားခဲ့ကြရလို့လားမသိဘူးဆရာ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ပိုးအသစ်ဖြစ်တယ်။ ဆေးသုတေသနတွေ ပညာရှင်တွေအများကြီးက နေ့တိုင်း လုပ်နေကြတယ်။ ခိုင်မာတိကျတဲ့ သတင်းနဲ့ အချက်အလက်တွေကို ၄-၁-၂၀၂၀ နေ့ကတည်းက တင်နေပါတယ်။
တင်ထားကြတာ အတော်များများ၊ မေးကြတာ အတော်များမှား မှားတယ်။ တချို့က ရမ်းပြောတာ။ တချို့က အထင်နဲ့ ပြောတာ။ တချို့က လိမ်ပြောတာ။
အမျိုးအမည်တွေ များလှပြီ။ တခုစီကို မဖြေအားပါ။ ဟိုက်ပိုသီးဆစ် ခေါ် စာတပုဒ်လည်း ကနေ့တွေ့တယ်။ အဲတာလည်း အထင်နဲ့ ရေးထားတယ်။ အဲတာတွေအကုန် မှန်တယ်လို့ မထင်ပါ။ ဆောရီး။
တပေါင်းလက မိန်ရာသီဆိုတာ မှန်ပါသလား ဆရာ
မိန်ရာသီဆိုတာ ငကြင်းပါးသန္တာန်ရှိသော တပေါင်းလလို့ဆိုတယ်။ ဒါမေဲ့ ရာသီတွေနဲ့ လတွေက ထပ်တူမကျပါ။
ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၉)ရက်မှ မတ်လ (၂၀)ရက်အတွင်း မွေးဖွားသူများသည် မိန်ရာသီဖွားများဖြစ်ကြသည်။
Horoscope Signs ဇာတာခွင်လို့လည်းခေါ်ကြတယ်။ နတ္ခတ္တဗေဒနဲ့ဆိုင်တယ်။ အရုပ် ၁၂ ခုရှိတယ်။
1. Aquarius: The Water Bearer (Jan 20-Feb 18) ရေထမ်းသမား (ကုံရာသီ)
2. Pisces: The Fish (Feb 19-Mar 20) ငါးနှစ်ကောင် (မိန်ရာသီ)
3. Aries: The Ram (Mar 21-Apr 19) သိုးထီး (မိဿရာသီ)
4. Taurus: The Bull (Apr 20-May 20) နွားသိုး (ပြိဿရာသီ)
5. Gemini: The Twins (May 21-Jun 20) လူအမြွာ (မေထုန်ရာသီ)
6. Cancer: The Crab (June 21-July 22) ကနန်း (ကရကဋ်ရာသီ)
7. Leo: The Lion (July 23-Aug 22) ခြင်္သေ့ (သိဟ်ရာသီ)
8. Virgo: The Virgin (Aug 23-Sep 22) အပျိုကညာ (ကန်ရာသီ)
9. Libra: The Scales (Sep 23-Oct 22) ချိန်ခွင် (တူရာသီ)
10. Scorpio: The Scorpion (Oct 23-Nov 21) ကင်းမြီးကောက် (ဗြိစ္ဆာရာသီ)
11. Sagittarius: The Archer (Nov 22-Dec 21) လေးသမား (ဓနုရာသီ)
12. Capricorn: The Goat (Dec 22-Jan 19) ဆိတ် (မကရရာသီ)
ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင် သင်္ကေတရုပ်တွေက တခုနဲ့တခု မတူတာတွေ့ရတယ်။ ချို့နေရာတွေမှာ ကင်ဆာနေရာမှာ ကျောက်ပုဇွန် (ဂဏန်းလက္မ) ပုံလဲတွေ့ရတယ်။ ကင်းမြီးကောက်ကို (ကုံရာသီ) မှာ သုံးတာလဲရှိပြန်သေးတယ်။
Zodiac Signs ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင် သင်္ကေတများ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/02/zodiac-signs.html
မိန်ရာသီတပေါင်းလ၊ လေးဆယ့်ငါးခုနစ်တုံးက သည်အချိန်မှာ၊ ဗိုလ်ချုပ်ဟာ မြင်းစီးပြီး၊ တပ်မတော်ကြီးကို စစ်ဆေး၊ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး စခဲ့တယ်။
မိန်ရာသီ (မန္တလေးဦးဘသိန်း) ကိုအံ့ကြီး https://www.youtube.com/watch?v=ij4YmirVgo0&list=RDAOHJBjnSzaU&index=5
မတ်တတ်ကအမှန်ဆိုတာ အခုမှသိရတယ် အသက် ၅၀ကျော်တောင် မတ်တပ်ပဲမှန်တယ်ထင်တာ ကျေးဇူးပါဆရာ
မတ်တရာ = ကျပ်အစိတ်
နှစ်မူး = တမတ်
သမီး အသက် ၂၇ ပါ အရပ် ၅ ပေ၃ လက်မရှိပြီး ပေါင် ၁၀၂ရှိပါတယ် အကြောအရမ်းတက်တတ်ပြီး နေ့ရက်တိုင်း ဘာမှ မလုပ်ချင်သလိုဖြစ်ပြီး ပင်ပန်းနေသလိုခံစားရပါတယ်ဆရာ အစားလည်းပုံမှန်စားပြီး အိပ်တာတော့ တခါတလေ နောက်ကျတတ်ပါတယ်ဆရာ ကွန်ပြူတာလည်းနေ့စဉ်သုံးရပါတယ်ဆရာ တခါတလေတော့ အပြင်တွေပတ်ရလို့ မသုံးရပါဘူးဆရာ သမီးအလုပ်က Marketing အလုပ်ပါဆရာ မျက်မှန်က power 100 နဲ့ 70 ရှိပါတယ် အကျင့်ပါမှာစိုးလို့ လိုအပ်မှပဲ တက်ပါတယ်ရှင် အဲ့လိုမျိူးရောလုပ်လို့ရလားဆရာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရော ဆိုင်ပါသလားရှင်
ရာသီနဲ့ အိမ်ထောင်ရေး မသိ။ မျက်မှန်ဆိုတာ စာကြည့်ကို စာကြည့်ချိန်မှာသာသုံးပြီး အဝေးကြည့်က အမြဲတပ်ထားရတယ်။ တခါတလေ သတ်ပုံတွေ ပြင်လိုက်တယ်။ ဆောရီး။ လိုအပ်မှပဲ တပ်ပါတယ်လို့ ရေးရတယ်။ တက်ဆိုတာ အထက်တက်တာ အတန်းတက်တာ။
၁။ တက် နဲ့ တတ် လည်း အများအားဖြင့် မှားကြတယ် ဆရာ။ ဆရာအချိန် ပေးနိုင်ရင် တင်ပေးစေချင်လို့ပါ။
၂ ခါလုံးမှာ တက်လို့ရေးလို့ ကီးမှားတာတော့ မဟုတ်လောက်။ သတ်ပုံမှားတာဖြစ်ပါမယ်။ ကြည့်တတ်၊ မကြည့်တက်လို့ ရေးရတယ်။
၃။ ဆရာရှင့် သမီးအသက် ၃၈ နှစ်ပါ။ ဒုတိယကိုယ်ဝန် ၁၅ ပတ်မှာ သွေးဆင်းပါတယ်ဆရာ။ ultrasound ရိုက်တော့ ကလေးနှလုံးခုန်တယ် အချင်းလည်း ပုံမှန်လို့တော့ ပြောပါတယ်ဆရာ။ သွေးကတော့ တညနေဘဲဆင်ပြီး မဆင်းတော့ပါဘူးဆရာ။ စိုးရိမ်ရလား။ ဘာဖြစ်တက်လဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ (ဘာဖြစ်တတ်လဲလို့ ရေးရတယ်။)
၄။ ဆရာ တခုလောက်မေးပါရစေ။ အတက်ပညာလို့ သုံးသလား၊ အတတ်ပညာလို့ သုံးသလားဆရာ။ (အတတ်ပညာက အမှန်။)
၅။ ဆရာ အတက်နိုင်ဆုံးကိုရေးမယ်ဆို အတက်လား၊ အတတ်လား။ မသိတာ မတက်တာဆိုရင်ရော တက်လား၊ ကက်လား၊ ခဏခဏမှားလို့။ (အတတ်နိုင်ဆုံး၊ မတတ်တာက အမှန်။)
၆။ ပညာတက်လား၊ ပညာတတ်လား၊ ပြောပြပါရှင့်။ (ပညာတတ်က အမှန်။)
၇။ ဆရာ မတ်တတ်ရပ် နဲ့ မတ်တပ်ရပ် ဘယ်ဟာကမှန်ပါသလဲ။ (မတ်တတ်ရပ်က အမှန်။)
၈။ The Money Drop Myanmar ရဲ့ အစီအစဉ်တခုမှာ TV ကနေကြည့်တာ အဖြေလေးခုပေးပြီး တခုရွေးရတာဆရာ။ ကျနော်က မတ်တတ်ရပ်လို့ ဖြေတာကို အဲဒီအစီအစဉ်က computer operator ပဲ မှားဖြေသလား မသိပါ။ သူတို့က မတ်တပ်ရပ်ကို အမှန်ဖြေပြတော့ တော်တော်အံ့သြသွားတယ်ဆရာ။ ကျနော်လဲ မမှားနိုင်ဘူးဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိတယ်ဆရာ။ ခုလိုဆရာပြောပြတော့ ပိုသေချာသွားတာပေါ့။ (မတ်တတ်ရပ်က အမှန်။)
၉။ ဆုံးမစာတခုမှာ စေတနာအမှားကြောင့် ဝေဒနာဖြစ်သွားတက်သည်လို့ ရေးတာဖတ်ရတယ်။ (ဖြစ်သွားတတ်သည် လို့ ရေးရတယ်။)
၁ဝ။ သမီး မကြည့်တက်လို့ပါဆရာ ညွန်ပြပါနော်။ ကူးစက်ရောဂါဆိုတာ ရောဂါနာမည်လား၊ ကူးစက်စေတက်သောလား။ ဘလော့ကို ဝင်မကြည့်တက်လို့ပါဆရာ။ ဝင်ကြည့်တက်သွားပါပြီ။ (မကြည့်တတ်၊ ကူးစက်စေတတ်သော၊ ဝင်ကြည့်တတ်လို့ ရေးရတယ်။)
၁၁။ ဆရာသေခြာစွာဖတ်ပါတယ် မသုံးတက်လို့ပါခင်ဗျာ (မသုံးတတ်။ ပို့စ်တင်ထားတယ်။ သေချာလို့ ရေးရတယ်။)
တပ်ငြိ = ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း
စစ်တပ်က အာဏာတက်သိမ်းတာ အနည်းဆုံး နှစ်ခါရှိပြီ။ အဲတာကြောင့် စာအမှန်တတ်သူတွေ နည်းသွားတယ်။
၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လဟာ မြန်မာပြက္ခဒိန်အရ ၁၃၈၁ ခု၊ တပေါင်းလဆန်း ၈ ရက်ကနေ တန်ခူးလဆန်း ၈ ရက်နေ့အထိ ကျရောက်ပါတယ်။
March နာမည်က လက်တင်လို Martius မာတိယပ်စ်ကနေလာပါတယ်။ ရိုမင်ပြက္ခဒိန်ပေါ်စမှာ အစဆုံးလ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ Mars ဆိုတဲ့ Roman god of war ရောမစစ်ပွဲဘုရားက နေယူထားတယ်။ စိုက်ပျိုးရေးကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တဦးနာမည်လည်းဖြစ်တယ်။
ဒီလမှာ စိုက်ပျိုးလုပ်ငန်းတွေလည်း စတင်ကြပါတယ်။
မတ်လအစမှာ ဆောင်းရာသီရဲ့နောက်ဆုံးရက်တွေနဲ့ လအဆုံးမှာ နွေရာသီထဲဝင်လာပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟာ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုန်ဝန်ကျောင်းတော်မှာ သီတင်းသုံးစဉ်က ခမည်းတော် သုဒ္ဓေါဒနမင်းကြီးကနေ ဖူးတွေ့ချင်လို့ အမတ်တွေ တယောက်ပြီးတယောက်ကိုပင့်ဘို့ ခိုင်းစေခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံး ဆယ်ကြိမ်မြောက်မှာတော့ ဖွားဖက်တော် ကာဠုဒါယီအမတ်ကို စေလွှတ်ရတယ်။ ကာဠုဒါယီကတော့ သွားရေးလာရေးသာတဲ့ တပေါင်းလကို ရွေးပါတယ်။ တပေါင်းလရဲ့ လမ်းခရီးသာယာပုံကို ဂါထာပေါင်း ၆ဝ နဲ့ဖွဲ့နွဲ့ပြီး၊ လျှောက်ထားတော့မှသာ ဘုရားရှင်ဟာ တပေါင်းလပြည့်နေ့မှာ ကပိလဝတ်ပြည်ကို ကြွတော်မူခဲ့တယ်။
• မတ်လ ၁ ရက် Independence Movement ကိုရီးယား လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုနေ့
• မတ်လ ၁ ရက် Self-injury Awareness Day မိမိကိုယ်ကို ထိခိုက်မှု အသိပညာပေးနေ့
• မတ်လ ၂ ရက် National Reading Day စာဖတ်ခြင်းနေ့ (ယူအက်စ်)
• မတ်လ ၄ ရက် World Maths Day ကမ္ဘာ့သင်္ချာနေ့
• မတ်လ ၆ ရက် Holi ဟင်ဒူဘာသာဝင်များ ဟိုလီနေ့
• မတ်လ ၈ ရက် International Women's Day နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့
• မတ်လ ၉ ရက် Canberra Day သြစတေးလျ ကင်ဘာရာနေ့
• မတ်လ ၁၂ ရက် World Kidney Day ကမ္ဘာ့ကျောက်ကပ်နေ့
• မတ်လ ၁၄ ရက် White Day (ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ တိုင်ဝမ်)
• မတ်လ ၁၅ ရက် World Consumer Rights Day ကမ္ဘာ့စားသုံးသူများအခွင့်အရေးနေ့
• မတ်လ ၂ဝ ရက် International Day of Happiness နိုင်ငံတကာ ပျော်ရွှင်စရာနေ့
• မတ်လ ၂ဝ ရက် World Sparrow Day ကမ္ဘာ့စာကလေးနေ့
• မတ်လ ၂၁ ရက် International Day for the Elimination of Racial Discrimination နိုင်ငံတကာ မျိုးနွယ်ခွဲခြားမှု ပပျောက်ရေးနေ့
• မတ်လ ၂၁ ရက် World Poetry Day ကမ္ဘာ့ကဗျာနေ့
• မတ်လ ၂၂ ရက် World Water Day ကမ္ဘာ့ရေနေ့
• မတ်လ ၂၆ ရက် Bangladeshi Independence Day ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် လွတ်လပ်ရေးနေ့
• Fire Prevention Month မီးဘေးကာကွယ်ရေးလ (ဖိလစ်ပိုင်)
• Women's History Month အမျိုးသမီးများသမိုင်းလ (အမေရိ၊ ယူကေ၊ သြစတေးလျ)
• Youth Art Month လူငယ်အနုပညာလ (အမေရိက)
Health Awareness ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးများ
• Epilepsy Awareness Month အတက်ရောဂါအသိပညာပေးလ (ကနေဒါ)
• Colorectal Cancer awareness month အူမကြီးကင်ဆာအသိပညာပေးလ
• American Dietetic Association National Nutrition Month အာဟာရအသိပညာပေးလ (အမေရိက)
• American Red Cross Month အမေရိကန်ကြက်ခြေနီလ
• National Endometriosis Awareness အင်ဒိုမီထရီရိုးဆစ် သားအိမ်ရောဂါအသိပညာပေးလ
• Multiple Sclerosis Education Month မာလ်တီပယ် စကယ်လရိုးဆစ်ရောဂါအသိပညာပေးလ
• Save Your Vision Month စက္ကုအမြင်အသိပညာပေးလ
• Workplace Eye Wellness Month လုပ်ငန်းခွင်မျက်စိအသိပညာပေးလ
• Patient Safety Awareness Week လူနာလုံခြုံရေ ပထမပါတ်
• National Sleep Awareness Week အိပ်စက်ခြင်းအသိပညာပေးပါတ်
• Brain Awareness Week ဦးနှောက်အသိပညာပေး ဒုတိယပါတ်
• National Poison Prevention Week အဆိပ်သင့်အသိပညာပေး တတိယပါတ်
. World TB Day မတ်လ (၂၄) ရက် = ကမ္ဘာ့တီဘီနေ့
၈-၃-၂၀၂၀ တပေါင်းလပြည့်နေ့ဖြစ်တယ်။ မတ်လထဲမှာ အငြင်းပွါးဖွယ်ရာ နှစ်ရက်ရှိတယ်။ အရင်က ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့ကိုသာ တောင်သူလယ်သမားနေ့လို့ သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂-၃-၁၉၆၂ နေ့မှာ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း အာဏာသိမ်းနေ့ကို ၁၉၆၃ ကစပြီး ပြောင်းလိုက်တယ်။ မတ်လ (၂၇) ရက်နေ့ကို ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့နဲ့ တပ်မတော်နေ့ ခေါ်တာ အထာမကျသေးပါ။ ၁၃-၃-၁၉၈၈ ဖုန်းမော်နေ့ ခေါ် မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးနေ့နဲ့ ၁၆-၃-၁၉၈၈ တံတားနီ အရေးအခင်းနေ့လို့လည်း မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။
• Birth flower = Daffodil နိုင်ငံတကာ ဒက်ဖိုဒီးလ်ပန်း။ မြန်မာနိုင်ငံ ကံကော်ပန်း။
• Aquamarine and Bloodstone သတ္တိကိုကိုယ်စားပြုသောကျောက်မျက်
• Zodiac signs ဆယ်နှစ်ရာသီခွင် Pisces မိန်ရာသီ (မတ်လ ၂ဝ အထိ) + Aries မိဿရာသီ (မတ်လ ၂၁ ရက် ကနေစတယ်)
• တပေါင်းလည်းကူး မိုးသားကျူး။ တပေါင်းသာခေါင် လများနောင်။
• တန်ခူးမည်မှတ် ဖက်ဆွတ်ရေတိုး သင်္ကြန်မိုး။ ပိတောက်ပန်း။
• January ဇန္နဝါရီလ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/january.html
• February ဖေဖေါ်ဝါရီလ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/february.html
• March မတ်လ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/march.html
• April ဧပြီလ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/april.html
• May မေလ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/may.html
• June ဇွန်လ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/june.html
• July ဇူလိုင် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/july.html
• August သြဂုတ်လ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/august.html
• September စက်တင်္ဘာလ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/september.html
• October အောက်တိုဘာလ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/october.html
• November နိုဝင်္ဘာလ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/november.html
• December ဒီဇင်္ဘာလ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/december.html